April 2019 – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on वीरगन्जमा भीषण आगलागी
वीरगन्ज – वीरगन्जको श्रीपुरस्थित एक उद्योगमा भीषण आगलागी भएकाे छ। मंगलवार साँझ ६ बजे अागलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ।
‘केमिकल भएको उद्योग हो, नाम र अरु विवरण अाउन बाँकी छ, आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भैरहेको छ,’ पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले भने, ‘यति क्षति भयाे भन्ने अवस्था छैन।’ आगो नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका टोली खटिएका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाका २ वटा दमकलको सहयोगमा आगो निभाउने काम भइरहेको छ।
बाक्लो बस्तीबीच उक्त आगलागी भएकाे र मानवीय क्षति कति भयाे भन्नेबारे पनि पत्ता लाग्न सकेकाे छैन।
वीरगन्जको श्रीपुरस्थित एक उद्योगमा भीषण आगलागी भएकाे छ। मंगलवार साँझ ६ बजे अागलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ।
‘केमिकल भएको उद्योग हो, नाम र अरु विवरण अाउन बाँकी छ, आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भैरहेको छ,’ पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले भने, ‘यति क्षति भयाे भन्ने अवस्था छैन।’
आगो नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका टोली खटिएका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाका २ वटा दमकलको सहयोगमा आगो निभाउने काम भइरहेको छ। बाक्लो बस्तीबीच उक्त आगलागी भएकाे र मानवीय क्षति कति भयाे भन्नेबारे पनि पत्ता लाग्न सकेकाे छैन।
जिल्ला इन्चार्जसहित विप्लवका १० कार्यक्रता प्रक्राउ
No Comments on जिल्ला इन्चार्जसहित विप्लवका १० कार्यक्रता प्रक्राउ
बाजुरा : जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले विप्लव समूहका बाजुरा इन्चार्जसहित १० जनालाई प्रक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराबाट गएको प्रहरी टोलीले बुढिगंगा नगरपालिकाका- १ अम्कोटबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरा प्रमुख डिएसपी उद्धबसिं भाटले बताए।
प्रक्राउ पर्नेमा बाजुरा इन्चार्ज भुप्रेन्द्र विक, सचिब भरत थापा, जिल्ला कमिटि सदस्य अंगराज भण्डारी र पबित्रा बिक रहेका छन्। त्यस्तै, विद्यार्थी कमिटिका गोरख रोकाया, समिक्षा बिक, सुशिला बिक, सुस्मिता बिक, केशातार बिक र प्रेम थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरुलाई मंगलबार बिहान ५ बजे प्रक्राउ गरेको हो।
प्रहरीले प्रक्राउ उनीहरुको साथबाट डेटोनेटर २ वटा, हेन्डग्रिनेट २ वटा र २ पाकेट गन पाउडर बरामत गरेको छ। त्यस्तै लाखौं रकम चन्दा संकलन गरेको चन्दा रसिद पनि फेला पारेको प्रहरी प्रमुख उद्धव भाटले बताए।
प्रहरीले उनीहरु गाउँमा गएर चन्दा संकलन गर्नुका साथै विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको भन्दै प्रक्राउ गरेको हो।प्रक्राउ परेका विप्लव समूहका कार्यक्रतालाई मुद्धा चलाउने जनाएको छ।उनलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा १ सय ३८ अनुसार विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर ऐन लगाइने प्रहरी जनाएको छ।
इन्टरनेट सेवा शूल्क घटाउने गरी दुरसञ्चार ऐन आउँदै
No Comments on इन्टरनेट सेवा शूल्क घटाउने गरी दुरसञ्चार ऐन आउँदै
काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट शुल्क घटाउने गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि कानून् मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विधेयक अघि बढाउने बताए ।
हाल प्रचलनमा रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दूरसञ्चार क्षेत्रको धेरै विषय समेट्न नसक्ने हुनाले संशोधन गर्न लागेको सञ्चार सचिव गुरुङको भनाइ छ ।
‘नेपालमा इन्टरनेट शुल्क साह्रै महंगो भयो । भारतमा एक सयले महिनाभर इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ । तर, नेपालमा एक हजारले पनि पुग्दैन’, सांसद गौरीशंकर चौधरीले भने ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले इन्टरनेट शूल्कबारे छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले इन्टरनेट चलाउन पैसा नलाग्ने तर, यो विधेयक आएपछि शूल्क लाग्ने भयो भन्ने जस्तो गरी प्रचार भएको छ’, उनले भनिन्, अहिले पनि हामीले इन्टरनेट चलाउँदा पैसा तिरिरहेका छौं । यो भुल्नु हुँदैन ।’
‘सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण होइन नियमन गरौं’
उपसमितिको बैठकमा सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको भन्दै सांसदहरुले त्यसबारे सरकारले नै प्रष्ट पार्नु सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘आम जनतामा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । विभिन्न कार्यक्रममा जाँदा विधेयकको मर्म त्यस्तो होइन भनेर हामी चाहिँ सरकारको प्रवक्ता जस्तो हुनुपरेको छ’समिति सभापति खड्काले भनिन् ।
उनले ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने र अस्पष्ट वाक्यांश राख्न नहुने भन्दै ऐन बनाउँदा जनताले प्रष्ट बुझ्ने शब्दहरु प्रयोग गर्न सुझाइन् ।
उपसमिति सदस्य इन्द्रकुमारी शर्माले पछिल्लो समयमा प्रविधिको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढेको उल्लेख गरिन् ।
अर्का उपसमिति सदस्य केदार सिग्देलले सरोकारवाला पक्षको सुझाव र सल्लाहका आधारमा सूचना प्रविधि विधेयक थप परिस्कृत हुनुपर्ने बताए ।
उपसमितिको एक महिने कार्यकालमा काम शून्य !
संसदमा छलफलमा रहेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न भन्दै विकास समितिले गत चैत १८ गते सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
समिति सचिवालयका अनुसार उक्त उपसमितिको बैठक यही वैशाख ९ गते बसेको थियो र विनाकुमारी श्रेष्ठलाई संयोजक तोक्यो । त्यसपछिको दोस्रो बैठक सोमबार मात्रै बसेको हो । सोमबारको बैठकले विधेयकमाथि पुनः एकपटक सैद्धान्तिक छलफल गर्ने विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । विधेयकमाथि २८ जना सांसदले ९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
एक महिनाको समय पाएको उपसमितिको म्याद भने बिहिबार सकिँदैछ । सोमबारको बैठकले मूल समितिसमक्ष म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको र वर्षे अधिवेशन शुरु नभएका कारण सांसदहरु राजधानी बाहिर गएकाले उपसमितिले काम गर्न नसकेको उपसमिति संयोजक श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘वर्षे अधिवेशन पनि सुरु भयो । अब माननीयहरु नियमित उपलब्ध हुने भएकाले विधेयकमाथिको दफावार छलफल गरेर छिट्टै टुङ्गो लगाउँछौं ।’श्रेष्ठको संयोजकत्वको उपसमितिमा सांसदहरु राजेन्द्र लिंदेन, इन्दु शर्मा, बहादुरसिंह लामा, अनिल झा, केदार सिग्देल र गौरीशंकर चौधरी सदस्य रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेललाई लक्ष्य गरी फेरि बम विस्फोट !
No Comments on मुख्यमन्त्री पोखरेललाई लक्ष्य गरी फेरि बम विस्फोट !
रोल्पा – रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाको जुगारमा मंगलबार बिहान ११ बजे पनि बम विस्फोट भएको छ। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हिँडेको सडक नजिकै बम विस्फोट भएको हो।
तिला पर सडक नजिकै जंगलमा बम विस्फोट भएको प्रदेश ५ सभाका सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनले जानकारी दिए। सदरमुकाम लिबाङबाट त्रिवेणी गाउँपालिकाको जुगारमा हुने नेकपाको आमसभामा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री पोखरेल त्यसतर्फ जाँदै थिए। उक्त समयमा बम विस्फोटको भएको खबर आफूले पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर एमसीले बताए।
तर, मुख्यमन्त्रीसँगे गएका रोल्पा प्रहरी प्रमुख डीएसपी दीपक खड्काले भने बम विस्फोट भएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए। भने, ‘सामान्य केही वस्तु पड्काएका होलान्, ठूलो केही होइन।
सोमबार पनि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई लक्ष्य गरी रोल्पा सदरमुकाम लिबाङ नजिकै तित्रीकोट जंगल क्षेत्रमा विस्फोट भएको थियो। घटनाको जिम्मा नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले लिइसकेको छ।
प्रपाेजहरु आइरहन्थे तर त्यसलाई ह्याण्डिल गरेर अगाडि बढेँ : गायिका शशी
No Comments on प्रपाेजहरु आइरहन्थे तर त्यसलाई ह्याण्डिल गरेर अगाडि बढेँ : गायिका शशी
शशी रावल नेपाली पार्श्व-गायन क्षेत्रकी एक गायिका तथा मोडल हुन् । उनी सन् २००७मा पहिलो सांगीतिक एल्बम ‘ईन्ट्रान्स’ मार्फत नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । यसै एल्बमको ‘चाहना सकियो, बहाना सकियो..’ बोलको गीतबाट नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा उनले चर्चा बटुल्न सफल भएकी थिइन् । हाल अमेरिकामा रहेकी गायिका रावलसँग न्यूज २४ का लागि कृष्ण कुमारी चाैँलागाईले गरेकाे अन्तरसंवाद-
नेपाली गीत-संगीत क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै रुचाइनुभएकाे छ, व्यस्तता निकै छ होला ? आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
खासमा आजभोलि व्यस्त नै चाहिँ छैन, २०१८ मा स्टेज कार्यक्रममा धेरे गीत गाएको कारण भोकल रेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सोही कारण अहिले भोकल रेस्ट कै क्रममा छुँ । हाल नेपालाबाहिर भएको कारण पनि घरव्यवहारमा नै व्यस्त छुँ भन्दा पनि होला ।
नेपाली संगीत क्षेत्रको विकासलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा निक्कै नै सुनौँला आयामहरु थपिएका छन् । सुरु-सुरुमा जस्तो क्यासेटको भरमा गायक-गायिकाहरु बस्नुपर्ने अवस्था छैन । गीत-संगीतबाट पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको संगीतको क्षेत्रले देखाएको छ । हरेक सकारात्मक कुरासंगै नकारात्मक कुराको विकास पनि भएको छ । कहिलेकाहीँ चैँ पहिलाको संगीतको समय गोल्डेन थियो भनेजस्तो लाग्छ ।
त्यो बेला जब क्यासेट खूब बेचिन्थे र अहिलेको सांगीतिक बजारलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
मेरो पनि क्यासेट बेच्ने समयको लास्ट-लास्ट समय थियो । २००७ तिरको समयको कुरा हो, त्यो समय क्यासेट बेच्दा कति उत्साह हुन्थ्यो । बजारमा फलानोको त यति क्यासेट बिक्री भयो रे, क्यासेटको माग बढेको छ भन्दा गायक गायिकालाई आउने फिलिङ्स् नै फरक थियो । अहिले युटुबको समय आएको छ, यसले पनि आफ्नो गीतको भ्यूज कति छ भन्ने त स्पष्ट पारेको छ । तर जति पहिलाकाे उत्साह, कौतुहतला हुन्थ्यो, त्यो अहिले छैन ।
अहिले संगीत क्षेत्रका चुनौतीहरु के छन् ?
अहिलेको गायक गायिकाहरु आउने जाने क्रम छ । जस्तो पनि गीत आउने क्रम बढी रहेको छ । एक किसिमले हेर्दा अवसर धेरै पनि छ पहिलाको भन्दा चुनौती धेरै नै छन् । नेपाली संगीतको बजार फराकिलो भइसकेको अवस्थामा यतै हराउने सम्भावना पनि बढेको छ । गीत-संगीतको क्षेत्रमा पनि अनेकाैँ किसिमका विसङगतिहरु बढिरहेका छन् । जस्ले गर्दा पनि समस्या उब्जिएको छ ।
पप गीत गाउनुहुन्छ, पप गाउनेलाई समाजले हर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ नि होईन र ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । संगीतमा पनि फरक टेस्ट रोज्ने श्रोताहरु अहिले छन् । प्राय गीत संगीत मन नपराउने मान्छे कमै हुन्छन् । पहिलाको समयमा पप गीत भन्दा ‘यस्तो पनि गीत हुन्छ र’ भन्ने थियो । तर अहिले हरेक मानिसको मानसिकता परिवर्तन भइरहेको छ ।
तपाईले गाएका प्राय: गीतहरु चर्चामा रहे ? यो चैँ कसरी ?
मैले थोरै गीत गाएँ तर धेरै श्रोता कमाएँ । मेरो ‘चाहना सकियो…’ भन्ने गीतले नै नेपाली संगीतको मार्केटमा नाम राख्न सफल भयो । सो गीतका श्रोताले मेरा अन्य गीतहरुलाई पनि माया दिनुभयो ।
हुन त मेरो गीत चर्चामा आउनुमा मेरो एकजनाको हातभन्दा पनि नेपाली श्रोताहरुको हात छ । मेरो स्वरलाई यदि मन नपराउनु भएको भए म संगीत क्षेत्रमा त्यसै हराउने पो थिए कि ! मेरा गीत चर्चामा रहनुको कारण अर्को चाहिँ सबैजनाले ‘मेरो स्वर फरक खालको छ’ भन्नुहुन्थ्यो, सोही कारण पनि हुन सक्छ ।
शशी रावललाई विवाहपछि संगीतलाई माया मारेर अमेरिका लागेको आरोप लाग्छ नि ?
संगीतलाई माया मारेको भन्नचाहिँ अलि मिल्दैन । संगीतको क्षेत्रलाई नजिकबाट हेरेको छु । परिवार र संगीतलाई ब्यालेन्स मिलाउनको लागि मात्र अमेरिका आएको हो । यहाँ बसेपछि झन् क्यापेबल हुन सकिन्छ ।
विवाहपूर्वको कुरा गरौँ- चर्चित गायिका सबैको आँखामा पर्न सफल, कत्तिको आउथ्यो प्रपोज ?
योङ समय भनेको फरक नै हुन्छ , त्यो मलाई मात्र पक्कै होइन होला । त्यसमाथि पप गायिका भनेपछि के हो कसो हो भन्ने कुरा आउने नै भयो । मलाई त्यो समयमा अलिअलि प्रपोजहरु आउथ्यो नआउने होइन तर त्यसलाई ह्याण्डिल गरेर अगाडि बढेँ ।
सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, फ्यानहरुले कत्तिको पछ्याउछन् ?
धेरै फ्यानहरुले पछ्याउनुहुन्छ । ‘म तपाईको ठूलो फ्यान हो, प्लिज मलाई फेसबुकमा साथी बनाउनुहोस् न’ भन्ने खालका म्यासेज गर्नुभएको हुन्छ । कत्तिले त थप गीतहरु किन आएनन् भनेर दुखेसो गर्नुहुन्छ ।
कस्ता खालका फोनकल र म्याजेजले वाक्क बनाउँछ ?
कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित नरहेर बकवासजन्य कुराहरुले वाक्क दिक्क बनाउँछ ।
नेपाली गीत-संगीतको थप विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
गीत-संगीतको क्षेत्रकै लागि भनेर धेरै संघ-संस्थाहरु खाेलिएका छन् । नेपाली मार्केट फस्टाउँदै गइरहेको पनि छ । रोयल्टीको कुराहरु पनि उठेको छ, रोयल्टी आयो भने संगीतकर्मी पनि सेक्युर हुन सक्छन्, यसले गीत-स‌ंगीतकाे थप विकास एवं संवर्द्धनमा टेवा दिन सक्छजस्तो लाग्छ ।
तपाईका गीत सन्न आतुर स्रोताहरुलाई कस्तो सरप्राइज लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ?
मेरा श्रोतहरुलाई अब नयाँ एल्बम लिएर आउने सोचमा छु । सायद त्यो छिट्टै नै हुन्छ होला । म तयारीको अवस्थामा नै छुँ ।
जापानमा भोलिबाट नयाँ शाही युगको सुरुवात, यसरी बन्दैछन् नयाँ राजा
No Comments on जापानमा भोलिबाट नयाँ शाही युगको सुरुवात, यसरी बन्दैछन् नयाँ राजा
टोक्यो । जापानी राजा आकिहितोले मङ्गलबार जापानको राजगद्दी त्याग गर्ने भएका छन् । ८५ वर्षीय आकिहितोले केही वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्नो स्वास्थ्यको कारण राष्ट्रप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भएको जनाउ दिएपछि उनले गद्दी त्याग्ने वैधानिक अनुमति पाएका थिए ।
आकिहितोले राजगद्दी त्यागेको भोलिपल्ट नै युवराज नारुहितोले जापानी राजसिंहासन सम्हाल्ने भएका छन् । अर्थात मे १ बाट युवराज नारुहितोले जापानी राजसिंहासन सम्हाल्ने छन् । जापानमा राजासँग कुनै राजनीतिक अधिकार हुँदैन तर राष्ट्रिय प्रतीकको त्यहाँ राजाको ठूलो सम्मान हुने गरेको छ ।
मे १ बाट जापानमा नयाँ शाही युगको शुरुवात हुदैछ । यसको तयारी स्वरुप हाल सो शाही युगको नाम घोषणा गरिएको छ । सोमबार जापानी सरकारका मुख्य सचिव योशिहिडे सुगाले यसको घोषणा गरेका थिए ।
सुगाले हस्तलिखित वर्णमालाहरुको एक कार्डबोर्ड देखाएर नयाँ युगको नाम ‘रेईवा’ सार्वजनिक गरिएको थियो । हाल जापानमा ‘हेइसी’ युग चलिरहेको छ । तीन दशकसम्म चलेको हेइसी युग यही महिना वर्तमान राजा आकिहितोले गद्दीत्याग गरेसँगै अन्त्य हुनेछ ।
जापानमा सम्राट अनुसार युगको नामकरण गरिन्छ । प्रधानमन्त्री शिन्जो आवेले शब्दको अर्थ व्याख्या गर्नका लागि देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने छन् ।
आफ्नो खराब स्वास्थ्यका कारण गद्दी त्याग्न चाहेको सम्राट आकिहितोले तीन वर्षअघि नै बताएका थिए । जापानमा गरिएका मत सर्वेक्षणहरूले अधिकांश जापानीहरूले सम्राटको गद्दी त्याग्ने मनशायको समर्थन गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि संसद्ले उनको गद्दीत्याग सम्भव तुल्याउन कानुनसमेत पारित गरेको थियो ।
युवराज नारुहितो र युवराज्ञी मासाको एक्लो सन्तानको रूपमा राजकुमारी आइको सन् २००१ मा जन्म भएको थियो तर जापानको वर्तमान कानुनले महिलालाई गद्दी आरोहण गर्न अनुमति दिएको छैन । नारुहितो सम्राट भएपछि फुमिहितो युवराजका रूपमा राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुनेछन् । त्यसपछिको क्रममा फुमिहितोका छोरा हिसाहितो हुनेछन् ।
कैलालीको लम्कीबजार तनावग्रस्त, प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज र दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार
No Comments on कैलालीको लम्कीबजार तनावग्रस्त, प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज र दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार
कैलाली । ट्रकको ठक्करबाट एकजना छात्राको मृत्यु भएपछि सुरु भएको प्रदर्शनले कैलालीमा उग्ररुप लिएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना७ख ९२३३ को ट्रकको ठक्करबाट मंगलबार विहान लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रा सुनीता रावलको मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछि सुरु भएको प्रदर्शनले अहिले लम्की बजार तनावग्रस्त बनेको हो । प्रदर्शनका क्रममा केही प्रहरी र स्थानीय घाइते भएका छन् ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई अहिले हम्मे हम्मे परिरहेको छ । त्यहाँ अहिले सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थप जनशक्ति मगाइएको छ ।
प्रहरीले ट्रक चालक सुनील भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने बताएको छ स्थानीयले ट्रक तोडफोड गर्नुका साथै सडकसमेत बन्द गराएका छन् ।कको ठक्करबाट एकजना छात्राको मृत्यु भएपछि सुरु भएको प्रदर्शनले कैलालीमा उग्ररुप लिएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ना७ख ९२३३ को ट्रकको ठक्करबाट मंगलबार विहान लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रा सुनीता रावलको मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछि सुरु भएको प्रदर्शनले अहिले लम्की बजार तनावग्रस्त बनेको हो । प्रदर्शनका क्रममा केही प्रहरी र स्थानीय घाइते भएका छन् ।
प्रहरीले ट्रक चालक सुनील भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने बताएको छ स्थानीयले ट्रक तोडफोड गर्नुका साथै सडकसमेत बन्द गराएका छन् ।